အာမခံအဖွဈ ဂရနျကို အပေါငျထားပွီး ငှခြေေးလြှငျ ခြေးငှပွေနျမဆပျလြှငျ အဆိုပါဂရနျမွကေို သိမျးဆညျးနိုငျသလား ? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
အာမခံအဖွဈ ဂရနျကို အပေါငျထားပွီး ငှခြေေးလြှငျ ခြေးငှပွေနျမဆပျလြှငျ အဆိုပါဂရနျမွကေို သိမျးဆညျးနိုငျသလား ?
29 Jul 2020 3:37 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
443 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အာမခံအဖွဈထားရှိထားသညျ့ ဂရနျကို ခြေးငှပွေနျမဆပျသညျ့အခါ သိမျးဆညျးလို့မရပါဘူး။
မညျသို့ဆောငျရှကျလို့ရမလဲဆိုလြှငျ ငှခြေေးတဲ့ ခြေးငှစောခြုပျမှာ အာမခံအဖွဈထားရှိသညျ့ ဂရနျကို အပေါငျထားရှိကွောငျး သတျမှတျခြိနျတှငျ ခြေးငှပွေနျမဆပျပါက အာမခံပစ်စညျးဖွဈသညျ့ ဂရနျ၏ ပိုငျရေးဆိုငျခှငျ့ကို တောငျးဆိုခှငျ့ရှိစရေမညျဆိုသညျ့ အခကျြအလကျကို ထညျ့သှငျးခြုပျဆိုရမှာဖွဈပါသညျ။
ထိုသို့အာမခံပစ်စညျးကိုထညျ့သှငျးခြုပျဆိုထားမညျဆိုလြှငျတော့ ခြေးငှရေလိုမှုနှငျ့အတူ ခြေးငှပွေနျမဆပျလြှငျ အာမခံပစ်စညျးကို လကျရောကျရလိုမှု တရားမမှုကို ထညျ့သှငျးစှဲဆိုရမှာဖွဈပါသညျ။
ထိုသို့ အာမခံပစ်စညျးကို ထညျ့သှငျးမခြုပျဆိုထားဘူးဆိုလြှငျတော့ ခြေးငှပွေနျရလိုမှုသာ စှဲဆိုနိုငျမှာဖွဈပါသညျ။ အထကျပါ အတိုငျးဆောငျရှကျမှသာ ငှခြေေးစာခြုပျဖွငျ့ အာမခံယူထားသညျ့ ဂရနျမွကေို လကျရောကျရရှိမှာဖွဈပါသညျ။
အာမခံအဖြစ် ဂရန်ကို အပေါင်ထားပြီး ငွေချေးလျှင် ချေးငွေပြန်မဆပ်လျှင် အဆိုပါဂရန်မြေကို သိမ်းဆည်းနိုင်သလား ?
အာမခံအဖြစ်ထားရှိထားသည့် ဂရန်ကို ချေးငွေပြန်မဆပ်သည့်အခါ သိမ်းဆည်းလို့မရပါဘူး။
မည်သို့ဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုလျှင် ငွေချေးတဲ့ ချေးငွေစာချုပ်မှာ အာမခံအဖြစ်ထားရှိသည့် ဂရန်ကို အပေါင်ထားရှိကြောင်း သတ်မှတ်ချိန်တွင် ချေးငွေပြန်မဆပ်ပါက အာမခံပစ္စည်းဖြစ်သည့် ဂရန်၏ ပိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ကို တောင်းဆိုခွင့်ရှိစေရမည်ဆိုသည့် အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့အာမခံပစ္စည်းကိုထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားမည်ဆိုလျှင်တော့ ချေးငွေရလိုမှုနှင့်အတူ ချေးငွေပြန်မဆပ်လျှင် အာမခံပစ္စည်းကို လက်ရောက်ရလိုမှု တရားမမှုကို ထည့်သွင်းစွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ အာမခံပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းမချုပ်ဆိုထားဘူးဆိုလျှင်တော့ ချေးငွေပြန်ရလိုမှုသာ စွဲဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ အတိုင်းဆောင်ရွက်မှသာ ငွေချေးစာချုပ်ဖြင့် အာမခံယူထားသည့် ဂရန်မြေကို လက်ရောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
မုဒိတာ အငှား ၂သိနျး